कस्तो बन्नेछ ८ अर्बको नयाँ संघीय संसद भवन ? | रुपान्तरण
कस्तो बन्नेछ ८ अर्बको नयाँ संघीय संसद भवन ?
२ श्रावण २०७६, बिहीबार १८:४१
काठमाडौँ । हाल प्रयोगमा आइरहेको बानेश्वरको संघीय संसद भवन वि.स.२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि सामान्य मर्मत गरेर काम चलिरहेको छ । तर अब सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको एक सय ७३ रोपनी आठ आना जग्गामा भब्य भवनको परिकल्पना गरेर निर्माण अघि बढाइएको छ । निर्माण सकिएपछि संसद आफ्नै भवनमा संचालन हुनेछ ।
सरकारले अत्याधुनीक सुविधासहितको संसद भवन बनाउने निर्णय पारित गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालय योजनालाई अगाडी बढाइसकेको छ । विशेष निर्माण योजना अन्तर्गतको यो योजना करिब ८ अर्ब रुपैंयाँ (भ्याट सहित)को हुनेछ ।
संघीय संसद् भवनपरिसरमा ११ वटा भवन निर्माण गरिनेछ । विशेष भवन निर्माण शाखाका उपसचिव प्रक्रिण तुलाधरका अनुसार आयोजनालाई ‘संघीय संसद भवन परिसर निर्माण योजना’ नाम दिइसकेको छ । सिंहदरबारको पुतली बगैंचा क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको भवन १७३ रोपनी ८ आना (८८२७१ व.मी) मा फैलिएको हुनेछ भने योजना तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न भइसक्नेछ ।
भवन निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पन्न गरिने भवन निर्माण विकास तथा भवन निर्माण विभागको योजना छ । उपसचिव तुलाधर भन्छन्, ‘यो योजना अन्तराष्ट्रिय स्तरको हो । इञ्जिनियरिङ्ग कार्य सम्पन्न गरि बोलपत्र आब्हन गरिसकेको र १७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले टेण्डर हालेका छन् । यसको सुनुवाई साउन महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’
यस्तो छ नक्साङ्कंन
आर्किटेक्चर डिजाइन इन्गर कन्सल्टेन्सीले र स्ट्रक्चरल डिजाइन डिजिकम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले गरेको नक्साङकन अनुसार परिसरका तीनवटा प्रवेशद्वार हुनेछन् । मूल ढोका दक्षिण तर्फ रहनेछ ।
संसदहरुको प्रवेशका लागि छुट्टै गेट बन्नेछ । जसका लागि उत्तरतर्फ नयाँ गेटको परिकल्पना गरिएको छ । दक्षिण र पूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको लागि प्रवेसद्वार रहनेछ ।
भवन, खुल्ला, हरियाली, पार्किङ र सडक क्षेत्रगरी चारवटा भागमा गुरुयोजना विभाजित गरिएको छ । जसमा पूर्ण क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत भवनले, ४५ प्रतिशत खुल्ला हरियाली क्षेत्रले र बाँकी क्षेत्रफल सडक तथा ‘वाटर वढी’ले ओगट्ने छ ।
सबैजसो भवनहरु तीन तलाको हुनेछ तर संसदीय दलको समिति भवन र कार्यालय भने पाँच तल्लाको हुनेछ । प्रत्येक भवनको साथमा आकर्षक हरियाली चौर तथा पानीका फोहोराहरु हुनेछन् ।
मुख्य संसद भवनको दाँयातिर संसदीय सचिवालय, राष्ट्रिय सभाको उत्तरतिर अति बिशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभाको उत्तरतिर पुस्तकालय र क्यान्टिन, संसदीय समितिको भवनसंगै दाँयाँतर्फ छापाखाना, मुख्य संसद भवनको बाँयाँ–उत्तरतिर पार्टी कार्यालयहरु रहनेछन् ।
यस परिसरको वरिपरि करिब ३ सय ५० गाडीहरु पार्किङ गर्न मिल्ने क्षेत्र रहेको छ । पार्किङका लागि नै भनेर तीनसय गाडी एकैचोटी अट्ने छुट्टै पार्किङ भवनको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सबै भवनमा काठमाडौंको स्थानीय वास्तुकला झल्काइने छ ।
भवन परिसरको परिकल्पना गर्दा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइएको उपसचिब तुलाधरले जानकारी दिए । गेटमा आधुनिक प्रविधिको चेकजाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्न दिइनेछ । भवनको हकमा भैपरी आउने संकटहरु, जस्तै– भुकम्प, आगलागी जस्ता विपत्तिपूर्ण खतरालाई ध्यानमा राखी नेपालको मापदण्ड अनुसार इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भवन कस्तो ?
प्रतिनिधि सभाको हकमा भुइँ तल्लामा चार सयजना अट्ने ठुलो हल हुनेछ । अन्य तलामा प्राविधिक कक्ष, सभामुख कार्यकक्ष , दर्शक, पत्रकार, आगन्तुक पाहुनाका लागि बाल्कोनी हल, सुरक्षा कोठा आदि रहनेछन् ।
त्यस्तैगरी राष्ट्रियसभा भवनमा करिब एकसय जना माननीयहरु अट्ने ठुलो हल रहने छ भने प्रतिनिधि सभा हलमा जस्तै अन्य महत्वपुर्ण कक्ष तथा हलहरु रहने छन् । विभागले भवन निर्माणसहतिको खाकाको एनिमेसन भिडियो पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
भवन निर्माणको एनिमेसन भिडियो